Dawladda Somalia oo dhex dhexaadin ka dhex billowday Dhinacyadda isku haya Hirshabelle, Maxay tahay Natiijadda la fili karo,? – Hornafrik Media Network
Wafdi ka socda Dawladda Federaalka Somalia oo uu hogaaminayo Wasiirka Arrimaha Gudaha, Cabdi Faarax Juxaa oo uu wehliyo Wasiirka Amniga Gudaha, Isloow, Xildhibaano ka tirsan Labada Aqal ee Somalia oo ka soo jeeda Hirshabelle ayaa ka dhex billaabay dhex dhexaadin dhinacyadda is khilaafsan ee Maamulka Hirshabelle.
Wafdiga ayaa la kulmay Xildhibaanaddii sheegtay inay xilka ka qaadeen Madaxwaynaha Maamulkaasi waxayna ka wada hadleen sidii loo joojin lahaa Xiisadda Siyaasadeed ee haraysay Hirshabelle, Waxaana ay Xildhibaanadda u sheegeen Wafdiga ka socday Dowladda Dhexe inay si sharci ah uga qaadeen Cosoble Xilkii uu hayay, isla markaana ay doonayaan oo kaliya in Dowladdu ay ka kaxayso Jowhar si aysan dhibaato kale u dhicin, Wafdiga Dowladda ayaa la filayaa inay Caawa la kulmaan Cali C/laahi Cosoble oo wali ku adkaysanaya inuu yahay Madaxwaynaha Sharciga ah ee Hirshabelle.
Maxaa laga filan karaa Kulamadan,?
Ma muuqdaan Ifafaale muujinaya inay Dhexdhexaadintan mira dhalayso, waayo Dowladda Somalia ayaa lagu eedaynayaa inay qayb ka tahay Dhinacyadda is haya, Waxaana uu Cosoble ku eedeeyay Xukuumadda uu hogaamiyo Raiisul Wasaare Khayre inay ka dambayso Khilaafka Hirshabelle, isagoo ugu goodiyay Khayre inuu isagu ka bixi doono Siyaasadda oo uu sheegay inuu si fudud ku soo galay.
Dadka la socda Arrimaha Shabeelaha Dhexe waxay aaminsan yihiin in Dowladdu ay wax ka ogtahay waxa dhacaya, sababtoo ah waxay ka hortagi kartay in Khilaafku uu gaaro heerka hadda uu joogo oo aan waxba laga qaban karin, Waxaana Dhex dhexaadin kasta oo la sameeyo hadda ay ku soo dhamaanaysaa Guuldarro, maadaama uu Khilaafku gaaray heer aan la isku soo laaban karin.
Dowladda Somalia marna kama go’na inay garab istaagto Cosoble, waxayse ku dadaali doontaa inay Cosoble ku qanciso inuu Muqdisho u raaco Wafdiga Dowladda si halkaas looga sii ambaqaado Wadahadaladda, taasoo Cosoble uu arko dabin siyaasadeed kale oo haddii mar uu ka baxo Madaxtooyadda Jowhar uusan mar kale halkaas ku soo laaban karin.
Cosoble oo ka soo jeeda Gobalka Hiiraan kama haysto taageero Gobolkaasi, sababtoo ah markii horaba beesha uu ka dhashay way saluugsanayd Maamulka Hirshabelle, waxayna u arkaan Cosoble nin qaatay Cad Quureed oo aan matalin, waana taa sababta ay uga aamuseen. balse Cosoble oo hadda Culays Siyaasadeed oo Xoog leh uu soo food saaray waxa uu raadinayaa inuu helo taageero Qabiil si uu ugu yaraan ugu sii shaqeeyo Magaaladda Baladwayne.
si kastaba ha ahaatee Dhex dhexaadintan ayaan laga filayn Natiijo marka loo eego Dhexdhexaadiyayaasha oo aan dhex dhexaad ahay, iyo Dhinacyadda is haya oo kala jooga marxalad aysan dib isugu soo laaban karin.